TaxJar Oo Soo Bandhigtay Emmet: Canshuurta Iibinta Cilmiga Sirdoonka | Martech Zone
Mid ka mid ah caqabadaha ugu qosolka badan e-commerce maalmahan ayaa ah in dowlad kasta oo maxalli ah ay rabto inay ku boodo oo ay sheegto canshuurta iibkeeda si ay dakhli badan ugu soo saarto gobolkooda. Laga bilaabo maanta, way jiraan 14,000 xukumida canshuuraha Mareykanka gudihiisa oo leh 3,000 nooc oo canshuurta wax soo saarka ah.
Celcelis ahaan qofka iibiya dharka khadka tooska ah ee internetka ma oga in dhogorta ay ku darsadeen badeecada ay hadda u kala soocayso dharkooda si ka duwan taas oo ka dhigaysa iibsigaas mid canshuur ka bixin kara Pennsylvania… gobol aan ka qaadin canshuurta iibka dharka, haddii kale. Taasina waa hal tusaale… liiskan aan dhammaadka lahayn ee sharciyada canshuuraha waxay keeneysaa malaayiin siyaabood oo si shil ah loogu qaado qaddarka khaldan ee canshuurta iibka… taasina waxay ganacsigaaga ku abuuri kartaa dhibaato.
Nidaamka lagu calaamadeeyo mid kasta oo ka mid ah wax soo saarkaaga lambarka canshuurta badeecada saxda ah wuxuu qaadan karaa saacado wuxuuna u abuuri karaa jahwareer badan qofka maareeya canshuurta iibka. Mana aha hal-socod hal-mar ah. Mar kasta oo aad ku darto SKUs cusub isku darka alaabtaada, waa inaad hubisaa inay si sax ah u kala sarreeyaan.
TaxJar ayaa qoday xogta, iyo, iyadoo loo maleynayo in isku celceliska cilmi-baaristaan ​​ay gaarayaan illaa daqiiqad SKU kasta, waxay qaadaneysaa macaamil iibiya ku dhowaad 3,000 oo SKU ah 50 saacadood si loo kala saaro alaabtooda.
Emmet: Canshuurta Iibka Cilmiga Sirdoonka
TaxJar horumartay Emmet, warshadii ugu horeysay macmal ah oo caqli badan robot kala soocida canshuuraha iibka. Waxaa lagu dhisay guriga injineerada TaxJar, Emmet waxay khuseysaa barashada mashiinka si loo badbaadiyo waqtiga macaamiisha TaxJar si otomaatig ah Kala soocida wax soo saarkooda iyagoo isticmaalaya nambarka cashuurta.
Tan iyo bilowgii sanadka 2020, Emmet wuxuu durbaba muujiyay 90% heerka guusha si sax ah uqeebinta alaabada macaamiisha TaxJar. Emmet, kala soocida alaabadaas 3,000 waxay qaadataa dhowr saacadood oo keliya. Sababtoo ah waxay ku shaqeysaa barashada mashiinka, Emmet wuxuu noqdaa mid xariif ah oo ka saxsan badeecad kasta oo cusub oo ay u kala saarto.
Emmet wuxuu fududeeyaa habka kala soocida badeecada, wuxuu hagaajiyaa saxsanaanta wuxuuna siiyaa macaamiisheenna iyo la-hawlgalayaasha kalsoonida ogaanshaha ganacsigooda inay taageerto teknolojiyadda cashuurta iibka ee ugu saxsan uguna sarreysa suuqa.
Alec Carper, TaxJar Agaasimaha Injineerinka
Waqtigaan la joogo, Emmet waxay caawisaa macaamiisha TaxJar ee ku kala sooca wax soo saarkooda barnaamijka TaxJar. Bilaha soo socda, Emmet wuxuu la shaqeyn doonaa macaamiisha TaxJar ee isticmaala canshuurta iibka API ee TaxJar ee SmartCalcs ama kuwa canshuurta iibka ka soo qaada kanaallada iibka eCommerce (sida Amazon, Shopify, BigCommerce, iwm.)
Codso TaxJar Demo
Ku saabsan TaxJar
TaxJar waxay awood siisaa ganacsiyada eCommerce inay mas'uul ka noqdaan u hoggaansanaanta cashuurta iibka. TaxJar gabi ahaanba automates xisaabinta canshuurta iibka, warbixinta iyo xareynta waxayna bixisaa barnaamijka wadajirka ah ee ugu dhameystiran ee teknolojiyadda, adeegga iyo lataliyayaasha canshuuraha. Ka sokow API-kooda, TaxJar waxay leedahay hal-guur isku-dhafan oo leh NetSuite, Magento, Shopify, Walmart, Amazon, BigCommerce, Ecwid, WooCommerce, Squarespace, Square, iyo Etsy.
Tags: aiAmazonAPIBigCommerceEcwidastaanmagentonetsuitecanshuurta iibkadukaankasquareboodadaTaxJarwalmartwoocommerce